Wakhtiga Ay Barcelona Si Buuxda U Dhammaystiri Doonto Saxeexa Lautaro Martinez Oo Jamaahiirta Kooxdaas Lagaga Farxiyay - Gool24.Net
Wakhtiga Ay Barcelona Si Buuxda U Dhammaystiri Doonto Saxeexa Lautaro Martinez Oo Jamaahiirta Kooxdaas Lagaga Farxiyay
May 13, 2020 Apdihakem Omer Adem
Heshiiskii ay mudada dheer kooxda Barcelona ku doonaysay gool dhaliyaha Inter Milan ee Lautaro Martinez ayaa u muuqda mid galaya wajiyadii ugu dambeeyay ee la isku fahmayo iyadoo wakhti xaadirkan xataa la hadal hayo xilliga heshiiska la dhammaystirayo.
Sida uu sheegayo wargeyska Sport, madaxda Barcelona ayaa ka warqabta inay waxkasta si wanaagsan u socdaan isla markaana heshiiska la dhammaystiri karoba gudaha bishan May walow shaacinta iyo saxeexu ay ka dambayn doonaan.
Kaddib mudo toddobaadyo ah oo wada xaajood usoo dhaxeeyay Barcelona iyo Inter Milan, Nerazurri ayaa diyaar u ah inay iska iibiyaan Lautaro Martinez iyagoo helaya lacag lagu daray laba xiddig oo Barca ah si heshiiska looga sii khafiifiyo 111-kii Milyan ee euro uu ku xidhnaa.
Barcelona ayaa heshiiskan u aragta mid aad u muhiim ah maadaama uu Lautaro noqon doono bedelka mudada dheer ee weeraryahan Luis Suarez oo ah No.9-ka ay kooxdu kusoo tiirsanayd sanadihii ugu dambeeyay.
Heshiiskan ayaa ah mid ay Barca ku garaacday kooxo waaweyn oo aysan si sahlan ku dhammaysan maadaama oo ay tartan kala kulmayeen kooxaha kala ah Real Madrid, Man City, Man United, Paris Saint-Germain iyo Chelsea.
Arturo Vidal ayay u badan tahay inuu u wareegi doono dhinaca Inter Milan iyadoo xiddiga labaad ee qandaraaska lagu darayo laga dhigi doono Nelson Semedo iyo Emerson oo Real Betis amaah ku jooga midkood.
Si kastaba ha ahaatee, Barcelona ayaan wax heshiis ah ku dhawaaqi doonin ilaa ay u safri karaan magaalada Milan kaddib marka uu dhammaado wakhtiga adag ee uu sababay caabuqa safmarka ah ee Korona.